We.com.mm - မူပိုင်ခွင့်၊ အမေရိကန်လုပ် Chipset နှင့် Huawei ရဲ့ OS အသစ် Hongmeng
အဖြစ်ကတော့ ကိုယ်ကမယ့်ဇာတ်မှာ ကိုယ်ပဲမင်းသား၊ ကိုယ်ပဲလူရွှင်တော်၊ ကိုယ်ပဲဆိုင်းဆရာ၊ ကိုယ်ပဲ တိုလီမိုလီ ဖြစ်နေပြီဆိုသလို ....
United States က Huawei ကို trade blacklist ထဲထည့်ပြီးနောက်ပိုင်း Huawei ဟာ အမေရိကန်အခြေစိုက် google ရဲ့ service တွေကို ထပ်ရတော့မှာမဟုတ်သလို အမေရိက နက်ဝေါ့ခ်အော်ပရေတာ ကုမ္ပဏီတွေဖြစ်ကြတဲ့ Quelcomm, AT&T, Verizon တို့ကပါ Huawei ကို Processor တွေ၊ Chipset တွေရောင်းတာ ရပ်ဆိုင်းလိုက်ကြတယ်။
နဂိုတည်းက နည်းပညာခိုးယူတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အမေရိကန်ဘက်က Huawei ကိုအခဲမကျေတာတော်တော်ကြာပါပြီ။ အမေရိက မှာ နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်ရင်တော်တော့်ကိုအလေးထားကြတာပါ။ နောက်ပြီး မူပိုင်ခွင့်ဆိုတာကိုလည်း လေးစားသမှုရှိကြတယ်။ တစ်ဦးတစ်ယောက်က တီထွင်မှုတစ်ခုလုပ်လိုက်ပြီ၊ အဲဒီ တီထွင်မှုကိုသက်ဆိုင်ရာက confirm ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်လည်း တီထွင်သူက သူဌေးတန်းဖြစ်တော့တာပါပဲ။ မူပိုင်ခွင့်တစ်ခုဟာ နှစ် ( ၂၀ ) အထိခံပါတယ်။ ပြောချင်တာက အဲ့ဒီမူပိုင်ခွင့် နှစ် ( ၂၀ ) အတွင်း အဲ့ဒီပစ္စည်းနဲ့ဆင်တူယိုးမှားဘာကိုမှ တီထွင်ခွင့်မရှိပါဘူး။
အမေရိကန်အခြေစိုက် Blackberry ဖုန်းကုမ္ပဏီကြီးဟာ ဘယ်လ်ဂျီယံက ဖုန်းကုမ္ပဏီလေးဖြစ်တဲ့ NTP ရဲ့ဒီဇိုင်းတစ်ခုကို ခိုးချခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီအတွက်အကျိုးဆက်ကတော့ Blackberry ဟာ NTP ကိုဒေါ်လာ သန်းခြောက်ရာကျော်လောက် နစ်နာကြေးပေးခဲ့ရတာပါပဲ။
မူပိုင်ခွင့်ရဲ့ကောင်းကျိုးကတော့ တီထွင်သူရော၊ တီထွင်မှုကို ဝယ်ယူတဲ့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးအကျိုးရှိစေမယ့် Win-Win Theory ရှိခြင်းပါ။ ဥပမာ ကိုယ့်တီထွင်မှုကို ကြိုက်တဲ့သူက မူပိုင်ခွင့်ပါတစ်ခါတည်းဝယ်သွားမယ်။ အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုရောင်းချလို့ရလာတဲ့ အကျိုးအမြတ်ရဲ့ ၁၀% ကို တီထွင်သူက ခံစားခွင့်ရှိတာပါပဲ။ ဥပမာ ဈေးကွက်ထဲမှာ ဒေါ်လာတစ်သိန်းဖိုးရောင်းရတယ်ဆိုရင် တီထွင်သူက ဒေါ်လာတစ်သောင်းရမှာပါ။ ဒေါ်လာတစ်သန်းဖိုးရောင်းရမယ်ဆိုရင် ဒေါ်လာ တစ်သိန်းရမှာပါ။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးရှိမယ့်ဥပဒေပါပဲ။ ဒါကို လူယဉ်ကျေးတို့ရဲ့တိုင်းပြည်မှာအသုံးချတယ်။ တကယ်ကောင်းတော့ အားလုံးကလက်ခံကြတယ်။
လူယဉ်ကျေးတို့ရဲ့ မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာမူဝါဒ ကိုတရုတ်သိပ်ပြီး သဘောတွေ့ပုံမရဘူး။ တရုတ်ရဲ့ ပေါ်လစီကရှင်းတယ်။ ပစ္စည်းတစ်ခုကိုကြိုက်ပြီဆိုရင် အဲ့ဒီပစ္စည်းနဲ့ဆင်တူယိုးမှားတွေလုပ်တယ်။ ပြီးရင် နဂိုပစ္စည်းထက် တန်ဖိုးသုံးဆလောက်နည်းတဲ့ဈေးနဲ့ ဈေးကွက်ထဲမှာ ဖြန့်ချိတယ်။ အဲ့တော့လူကြိုက်များပါတယ်။ တခြားမကြည့်နဲ့။ ဖုန်းတွေပဲကြည့်ပါ။
အမေရိက လုပ် iPhone တွေမှာ fingerprint ပါလာတယ်။ သိပ်မကြာဘူး။ huawei လည်းပါလာတယ်။ အဲ့ဒါက မပြောလိုဘူး။ ဒါပေမယ့် iPhone လိုမျိုး body casing တွေ၊ ကင်မရာတွေ ကိုပါဆင်တူယိုးမှားတွေတုပလာပြီး နောက်ပိုင်းကျတော့ သူ့ရဲ့ဈေးကွက်က Apple နဲ့Samsung ကိုပါကျော်တက်သွားတယ်။ နောက်မှပေါက်တဲ့ရွှေကြာပင်က မင်းမူတာကိုလက်ခံလို့ရကောင်းရပေမယ့် ကိုယ့်နည်းပညာကိုခိုးပြီး ကိုယ့်နားရွက်ကိုတံတွေးဆွတ်သွားတာကိုတော့ ဘယ်သူမှသည်းခံနိုင်မယ်မထင်ပါ။
သည်းခံမှုကုန်သွားတဲ့အခါ အမေရိကန်ဘက်က အပေါ်မှာပြောခဲ့သလို အရေးယူမှုတွေလုပ်တယ်။ အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကတည်းက ဂျပန်အပါအဝင်နိုင်ငံတစ်ချို့ကိုအခွန်မဲ့ပစ္စည်းတင်သွင်းလို့ရပြီဆိုပြီး ကြေငြာလိုက်တယ်။ ဒါဟာ တရုတ်ကို Trade Wars နဲ့အပြုတ်ဆော်မယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲ။ အခုလို Google က Support လုပ်နေတဲ့ Security System နဲ့ တခြား App တွေကိုအသုံးပြုခွင့်ဘန်းလိုက်တဲ့အပြင် ဒိတ်ဒိတ်ကြဲကုမ္ပဏီကြီးတွေကပါ Chipset တွေမရောင်းပေးတော့ဘူးဆိုတော့ကာ Huawei ကြည့်ရတာ လိပ်ကလေးခြေတိုတို မန်ကျည်းရွက်နဲ့ကျို ဆိုသလိုဖြစ်နေတာပေါ့။
အခု Huawei က Hongmeng ဆိုပြီး OS အသစ်လုပ်နေတယ်ကြားတယ်။ ၂၀၁၂ တည်းက အဲ့ဟာကိုလုပ်နေတာတဲ့။ ဒီအတိုင်းဆိုတော်တော်လေးအမြော်အမြင်ကြီးတယ်ပြောရမှာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လောက်ပဲ အမြော်အမြင်ကြီးပါစေဦး .. ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့အဓိက ဦးနှောက်လို့တောင်ပြောလို့ရတဲ့ Chipset တွေကိုတော့ အမေရိကန်ကုမ္ပဏီတွေဆီကနေ ဝယ်သုံးနေရတာပါ။ အဲ့တော့ ရိုးရိုးလေးတွေးကြည့်မယ် .. Chipset မရှိတဲ့အခါ OS ကြီးဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း ဘာမှလုပ်မရဘူး .. တဖြည်းဖြည်းနဲ့ Market ပျောက်လာမယ် .. နောက်ဆုံး ဖုန်းလောကမှာ Huawei ဆိုတာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပျောက်သွားမယ် .. ဒါကတော့ စဉ်းစားကြည့်တာပေါ့ ..
နောက်ပြီး အမေရိကန်က Huawei ကို ဘန်းလိုက်တာ နှိမ်တယ်ဆိုပြီး တစ်ချို့ကပြောတယ် .. မှန်သင့်သလောက်မှန်ပေမယ့် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာမူဝါဒတွေကိုလည်း စဉ်းစားရပါမယ်။ တရုတ်လုပ်ဖုန်းတွေက သုံးစွဲသူဆိုင်ရာလုံခြုံရေးအာမခံမှုဘာမှမရှိလို့ပါ .. ကိုယ့်ရဲ့ personal data တွေကို မိန်းဆာဗာကြီးမှာ လူအယောက်တစ်ရာလောက်က ဝိုင်းထိုင်ပြီးကြည့်နေမှာကို ဘယ်သူကလိုချင်မှာလည်း ?
မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှုအများဆုံးဆိုရင် တရုတ်ကိုပဲလက်ညှိုးထိုးမှာ .. အမယ် .. သူများနည်းပညာကျ တစ်ဖြဲနှစ်ဖြဲခိုးယူပြီး သူ့ဆီက အာတီကယ်ကျတော့ Credit မပေးပဲယူမသုံးနဲ့ဆိုပဲ .. တတ်လည်းတတ်နိုင်တဲ့တရုတ်ကြီး ...
Source - huaweicentral.com
ကျောင်းမှာ နာမည်စာရင်းခေါ်တာ ပြန်မထူးလို့ ပါးအချက်(၄၀)ရိုက်ခံရတဲ့ ကျောင်းသား (ရုပ်သံ)
ငိုချင်နေတဲ့ မျက်လုံးလေးနဲ့မို့ အင်တာနက်မှာ နာမည်ကြီးလာတဲ့ တရုတ်ကြောင်လေး
Pitbull ခွေးသုံးကောင်ဝိုင်းကိုက်ခြင်းကြောင့် (၉)နှစ်သမီးလေး သေဆုံး